कला सस्कृती हाम्रा चिनारी हुन संरक्षण गरौ जि.सी. | MYAGDINEPAL
Home / अन्तरवार्ता / कला सस्कृती हाम्रा चिनारी हुन संरक्षण गरौ जि.सी.
कला सस्कृती हाम्रा चिनारी हुन संरक्षण गरौ जि.सी.
पर्वतमा जन्मिएर पनि म्याग्दीलाई कर्म क्षेत्र बनाएका म्याग्दीमा शिक्षण पेशा सँगै लोक दोहोरी गीतमा लामो अनुभव हाँसिल गरेका । सञ्चार क्षेत्रमा पनि पाइला हालेर अहिले शिक्षण पेशामै रहेका म्याग्दी जिल्ला र म्याग्देली संगीतलाईमायाँ गर्ने नाम हो कृष्ण जिसी । म्याग्दीका प्रकाश पौडेल, किरण सापकोटा र कृष्ण जिसीले म्याग्दीको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै राष्ट्रिय प्रतियोगीतामा सहभागिता जनाउदै थुप्रै अवार्डहरु हात पारे । उनै म्याग्दीको संगीत क्षेत्रमा अहोरात्र खटेका जिसीसँग अमृत बास्कुनेले गरेको कुराकानीः